Haalaqilleensaa Tajaajilla Biyyoolessa waligala akka jedhanitti “impactful ykn Dhiibbaa” qilleensi g | KWIT
Oromo News 12.28.2020
Gaazexan Sioux City akka gabaaseti, guyyaa gidirsanbata lakkoofsa namni covid-19 qabame jiaan laman darbe kana keessa irra namni 17 qofa qabamuudhan lakkofsi baaye xiqqaate tae galmaahe jira. Guyyaa har’a, namni 19 kan dabalame yootau akka dhukubni jalqabe waliigalatti namni 12,000 qabamanii jiru namni due ammo 163 dha.
Dhukubsattooni hospitaala Sioux City lama keessa jiran nama 55 akka tae dubbatame. Kunis December 1st irraa qabame harka qixxee kan ta’eedha.
Qorannoo bultii 14 Woodbury County keessati godhameen lakkoofsi kan gad bue yoo tau amma parsantii 13.5% dha. Torbaan tokko dura, parsanti 15% ture. Ammati ammo counties qixxee oluu northwest Iowa keessati parsanti 15% ol akka ta’an himame. Buena Vista County northwest Iowa keessati lakkoofsa jalqaba irra kan jirtu yoo tau innis parsantii 20.5% dha.
Ogeessi fayyaa naanicha akka jedheti Covid-19 qabamuun hir’isuudhaf haguugi fuula godhachuu, adaan fageenya ufii eegachu, harka dhiqachuu, yoo dhukubsatan mana taa’u fi walitti qabamuu hin barbaachifne irraa uf eegudha.